कोरना भाइसरसंग लड्ने औसधि नेपालमा फ्री मा बाँडीदै ! – Jagaran Nepal
कोरना भाइसरसंग लड्ने औसधि नेपालमा फ्री मा बाँडीदै !
कोभिड १९ (कोरना भाइसर) रोगको लागि उपयोगी हुने होमियोप्याथिक आर्सेनिक एल्ब ३० नामक औषधी बुटवलमा पनि बितरण शुरु गरिएको छ । यो रोग प्रतिरोधात्मक औषधि हो । अन्य रोगसंगै कोरना संक्रमको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने यो औषधिलाई नेपाल सरकारले प्रोटोकलमा राखेको छ ।बुधबार बेलुका बुटवलको कालिकानगरबाट कालिका कल्याणकारी समाजले औषधिको निःशुल्क बितरण शुरु गरेको हो ।
पहिलो चरणमा कालिकानगर क्षेत्रका दुई हजार मानिसलाई औषधि बितरण गरिएको समाजका सचिव दिनेश कुमार कुँवरले जानकारी दिए । बुटवलको ओमकालिका होमियोप्याथिक अस्पताल प्रालिको प्रायोजनमा औषधि निःशुल्क बितरण गरिएको कुँवरले बताए ।
औषधि वितरण कार्यक्रममा बोल्दै कालिका कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष एवं ओमकालिका होमियोप्याथिक अस्पताल प्रालिका संचालक माधव थापाले प्रदेश नं. ५ का करिव एक लाख मानिसलाई यो औषधि निःशुल्क वितरण गरेर सहयोग गर्ने उदेश्य आफूहरुले लिएको बताए । कोरना महामारीको अवस्था थप जटिल हुन नदिन यो औषधि उपयोगी हुने तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गर्ने भएकाले अन्य रोग समेत लाग्न नदिन औषधि बितरण गरिएको उनले प्रष्ट पारे ।
यो औषधि खासगरी भारतमा उत्पादन हुने गरेको र नेपालमा पनि होमियोप्याथिक अस्पतालहरुले भारतबाट कच्चापद्धार्थ ल्याई उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्वका १ सय ८० देशले यो औषधि प्रयोग गर्ने गरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । सन्. १९१८ मा भएको स्पेनी फ्लुमा पनि यस्तै प्रकारको होमियोप्याथिक औषधि विभिन्न देशमा खुवाइएको थियो । त्यतिबेला यो औषधि सेवन गर्नेमध्ये जम्मा एक प्रतिशत मानिसमात्र उक्त फ्लुबाट मरेका बताइन्छ ।
यसैबीच उक्त औषधि लिन चाहने क्रियाशील पत्रकारहरुको लागि नेपाल पर्यटन पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. ५ समितिले बितरण गर्नेभएको छ । ओम कालिका होमियोप्याथिक अस्पताल प्रालिको सहयोगमा महासंघले आफ्ना सदस्यहरु तथा अन्य इच्छुक पत्रकारहरुलाई निःशुल्क औषधि बितरण गर्ने महासंघ प्रदेश ५ समिति महासचिव कपिल ज्ञवालीले बताए ।